Ixesha loVimba woXolo- ukubala ukuya eBukumkanini
Udidi Archives: Isahluko soxolo
UFr. I-Ottavio-Ixesha elitsha loXolo
ICawe yam iyakwenziwa ngokutsha…
ISibhalo-Imfihlelo yoBukumkani bukaThixo
KuBukumkani bukaThixo obukhoyo nobuzayo.
Umhla woXolo: Iincotsha ezivela kwiZambulo ezininzi zaBucala
Ukusa okusemva kwale mihla yobumnyama…
"UBawo wethu" uya kuzaliseka.
UYesu uyeza, kodwa hayi isiphelo sehlabathi.
Uninzi lwenu luya kubona ukubuya kovuyo koNyana wam.
Cling ngokuqinileyo kum. Ulawulo lotshaba seluphelile.
Virginie - Uloyiso kunye noBukumkani obuzayo
Eli lixesha lokuhlanganisa abaprofeti bam.
UMoya oyiNgcwele uyakutshintsha ubuso bomhlaba.
UCora Evans-Ubudala beGolide kunye nokuHlala kweMystical
Kobo bukumkani begolide, ndinokuhlala ngokobuqu…
Ndifuna ukunenza babe ngcwele ukuze nizukise uBukumkani bukaThixo. Vula iintliziyo zakho! Kungekudala umhlaba uza kuguqulwa ube lilizwe elitsha, ngaphandle kwentiyo okanye ubundlobongela. Umhlaba uya kuba yigadi entsha kwaye bonke baya kuhlala ngolonwabo. (Oktobha 8, 1988)